Faylka xxx.docx Lama Furi Karo Maadaama Dhibaato Ka Taagan Tahay Mawduucyada
Bogga ugu weyn Products DataNumen Word Repair Faylka xxxx.docx Lama Furi Karo Maadaama Dhibaatooyin Ka Jiraan Mawduucyada
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan "Faylka xxxx.docx lama furi karo maxaa yeelay dhibaatooyin ayaa ka jira waxyaabaha ku jira" qalad
Markaad furanayso dukumiinti erey ah oo dhaawacan Microsoft Word 2007 ama noocyo ka sareeya, waxaad arkaysaa farriinta qaladka ah ee soo socda:
Faylka xxx.docx lama furi karo maxaa yeelay dhibaatooyin ayaa ka jira waxyaabaha ku jira.
(Faahfaahin: Faylka wuu xumaaday lamana furi karo.)
halka 'xxx.docx' uu yahay faylka dukumiintiga ee musuqmaasuqa ah.
Dhagsii badhanka "OK", waxaad arki doontaa farriinta qaladka labaad:
Ereyga waxaa laga helay waxyaabo aan la aqrin karin oo ku jira xxx.docx. Ma rabtaa inaad soo ceshato waxyaabaha ku jira dukumintigan? Haddii aad ku kalsoon tahay isha dokumentigan, guji Haa.
Dhagsii badhanka “Haa” si aad ugu oggolaato ereyga inuu ka soo ceshado dukumintiga.
Haddii Word ku guuldareysto inuu dayactiro dukumiintiga musuqmaasuqa, waxaad arki doontaa farriinta qaladka saddexaad. Sababta oo faahfaahsan way kala duwanaan doontaa waxayna kuxirantahay xaaladaha kala duwan ee musuqmaasuqa, tusaale ahaan:
(Faahfaahin: Microsoft Office ma furi karo faylkan maxaa yeelay qaybo ayaa ka maqan ama aan ansax ahayn.)
Hoos waxaa ku yaal shaashadda shaashadda ee farriimaha qaladka:
Dhagsii badhanka "OK" si aad uhesho sanduuqa farriinta.
Marka qaybo ka mid ah dukumiintiga Ereygu musuqmaasuqo, waxaad heli doontaa farriimaha qaladka ee kor ku xusan. Hadana musuqmaasuqu aad u daran yahay oo eraygu uusan soo kaban karin, waad isticmaali kartaa badeecadeena DataNumen Word Repair si loo hagaajiyo dukumiintiga ereyga loona xalliyo qaladkan.
Mararka qaar Word wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ka soo ceshado qoraalka qoraalka dukumiintiga musuqmaasuqa ah, laakiin sawirada qaar lama soo celin karo. Xaaladda noocaas ah, sidoo kale waad isticmaali kartaa DataNumen Word Repair inuu ka soo kabsado sawirada.
Muunad fayl dukumiinti qoraal ah Faylka waxaa soo ceshaday DataNumen Word Repair